मतदान केन्द्रमा दलबीच सहमति नहुँदा सिफारिश रोकियो » खबरहरुको एउटै केन्द्र
मतदान केन्द्रमा दलबीच सहमति नहुँदा सिफारिश रोकियो
शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ०७:०४ मा प्रकाशित !
४ चैत, बैतडी। मतदान केन्द्र निर्धारणका विषयमा राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा बैतडीमा मतदान केन्द्र सिफारिस गर्न सकिएको छैन । दलले विसं २०७० मा तय भएका मतदान केन्द्र बदल्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी माधवप्रसाद फुयाँलले जानकारी दिए । दलका प्रतिनिधिले २०७० सालको भन्दा १० वटा केन्द्र थप्नसमेत माग गरेका छन ।
मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको बैठकमा ठूला दल नेपाली काँग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रतिनिधिले मतदान केन्द्र परिवर्तनको माग गरेको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी फुँयालले भने, – डिलासैनी गाउँपालिका, पुरचौडी नगरपालिका र सिगास गाउँपालिकामा मतदान केन्द्र साबिकको भन्दा परिवर्तन गर्नुपर्ने आवाज उठेको छ । “तर निर्वाचन आयोगले अवस्था हेरेर दुई–चारवटा मतदान केन्द्र मात्र थप्न भनी निर्देशन दिएको छ”, उनले भने ।
विवाद देखिएका ठाउँमा स्थलगत अध्ययन गरी मतदान केन्द्र सिफारिस समितिको बैठक बसी टुङ्गो लगाउने उनले जानकारी दिए । बैतडीमा विसं २०७० मा संविधानसभाको निर्वाचनमा रहेका एकसय २० मतदान केन्द्रको एकसय ८८ स्थल तय गरिएका थिए ।
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले बैतडीमा चार नगरपालिका र ६ गाउँपालिका सिफारिस गरेको छ । जिल्लामा ६५ हजार नौसय ३२ महिला, ६२ हजार आठसय ५० पुरुष र एकजना तेस्रोलिङ्गी गरी एक लाख २८ हजार सात सय ८३ मतदाता रहेका जिल्ला निर्वाचन कार्यालय बैतडीले जनाएको छ ।
आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा २०७३ फागुन ९ गतेसम्म विवरण दर्ता गराएका १८ वर्ष उमेर पूरा गरेका मतदाताले मात्र मतदान गर्न पाउने भएका छन । आगामी वैशाख ३१ गते निर्वाचनमा सहभागी हुन बैतडीमा विभिन्न १२ दलले नाम दर्ता गराएका छन
PREVIOUS POST Previous post: व्यवसायीद्वारा चेपाङ बालबालिकालाई खाद्यान्न सहयोग
NEXT POST Next post: ट्रकको ब्रेक फेल हुँदा दुर्घटना
बस दुर्घटना, एकको मृत्यु, आधा दर्जन बढी घाइते शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ०७:०४
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ०७:०४
नेकपाले न्यूरोडमा लगायो डोजर, यस्ता छन् ६ कारण शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ०७:०४
निर्वाचित रेशमलाई जेल कोचेर ठूलो अन्याय : नेतृ हिसिला यमी शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ०७:०४
निर्मला हत्या प्रकरणः प्रदीप-विशाल पनि दिलिपजस्तै ‘नक्कली’ अभियुक्त ? शुक्रबार, चैत्र ४, २०७३ ०७:०४